Isifundo se-OkuyisiSekelo sokuHlela
Ungakugwema kanjani wena ukuphazamiseka nokusebenza ngokweqile futhi uqinisekise impumelelo yakho kunoma yisiphi isenzo.
Isinyathelo sokuqala okufanele usithathe ukuze uhlele ngempumelelo noma yini, noma ngabe kungumsebenzi wakho noma inkampani yonke.
Lokho i-Organizing Board eyikho nokuthi ngokuqondile uyidala kanjani ukwenza isenzo sakho, iphrojekthi noma iqembu likhiqize kakhulu.
Noma ngubani uyabona ukuthi ukube izinto bezihleleke kangcono abantu bebezobangcono. Sonke sibe nokuhlangenwe nakho nge-red tape e-bureaucratic, ama-ejensi kahulumeni angenabuntu noma amabhizinisi ezentengiselwano anganaki. Inkinga yokuhleleka kahle ibucayi futhi ibiza izigidigidi kudoti, ukungasebenzi kahle kanye nokwehlisa umkhiqizo.
Ezingeni lomuntu ngamunye, ukuhlela kuyisihluthulelo—futhi esivame ukulahleka—isici empumelelweni yomuntu siqu. Kuyisidingo futhi somndeni ochumayo. Ukutholwa kwezinjongo zomuntu, noma ngabe kuncane noma kukhulu kangakanani, kudinga ulwazi lokuhleleka. Ngabe usiphatha kahle kanjani isikhathi sakho, imisebenzi yakho kanye nezinsiza kusebenza zakho ngokuyimpumelelo nangendlela efanele? Ngabe uzinciphisa kanjani iziphazamiso? Futhi uwaqondanisa kanjani amandla akho ukuze ufeze izinhloso zakho?
U-L. Ron Hubbard wabona ukuthi uMuntu wayentula ukuqonda ukuthi ahlele kanjani imisebenzi yakhe njengoba ayemayelana nesimo sakhe sangempela somoya. Futhi ingxenye enkulu yocwaningo lwakhe yanikelwa ukucacisa isihloko senhlangano, umsebenzi awufeza ngokuphelele.
Isifundo lesi siqukethe kuphela eminye yemigomo eyisisekelo yobuchwepheshe bokuhlela ayithuthukisile, kepha lezi zinto eziyisisekelo, ngokwazo, zanele ukukhulisa kakhulu umsebenzi wanoma yimuphi umzamo, noma ngabe oweqembu noma owomuntu. Isiphithiphithi nokudideka akuzona izimo zemvelo zempilo.
Zikhona kuphela lapho imithetho yemvelo ingaqondakali futhi ingalandelwa. Nayi eminye yemithetho yemvelo yokuhlela nokuhlela.
Incwajana OkuyisiSekelo sokuHlela
Lapho sekuqediwe Isifundo se-OkuyisiSekelo sokuHlela, uzothola isitifiketi nge-email.
“Ngithole ulwazi olukhulu ngendaba yokuhlela, obekunqunyelwe kakhulu esikhathini esedlule. Manje sengiyazethemba ngale ndaba futhi noma kunini lapho ngiya khona kunoma yimuphi umsebenzi, ngiyazihlela neminyango engamashumi amabili nanye evela kule ncwajana, bese ngiqala ukufeza umsebenzi kahle.
“Lokhu ngikusebenzisa empilweni yami uqobo, empilweni yomndeni wami nasenhlanganweni yami lapho ngisebenza khona ngithola imiphumela emihle. Ngishintshe ibhodi lenhlangano yenkampani yami, futhi wonke umuntu walithokozela lolu hlelo.
“Njengoba sichaze imisebenzi nemisebenzi okumele iqedwe yizo zonke izikhundla zeminyango nalabo abasebenza nabo, ukuqapha umsebenzi sekucacile futhi kwasebenza ngempumelelo.
“Ngiyethemba ukuzithuthukisa ngokwenza lolu lwazi kuzo zonke izingxenye zempilo yami, nokufundisa abanye. Ngiyabonga ngokubambisana nokusekela kwenu ngomusa. ”
“Kuyithuba elinamandla kakhulu lokufunda ukuthi ngingayithuthukisa kanjani impilo yami, ngokusebenzisa lezi zindlela Zesisekelo Sokuhlela ekusebenzeni.
“Kwakuyisifundo esihle kakhulu—sangifundisa ukuthi ngizihlele kanjani kangcono ukuze ngikwazi ukukhiqiza, futhi ngabona ukuthi ngangilahlekile kangakanani maqondana nokuhleleka kuzo zonke izingxenye zempilo yami.
“Ukuthola konke lokhu bekuyisipiliyoni esikhulu futhi ngalolu lwazi ngingasiza abanye bazi ngalesi sifundo ngakho-ke bazisize bakhule futhi bathuthukise izimpilo zabo njengabantu nanjengabaholi. Kepha okokuqala, umuntu kufanele azihlelele ukuba yisibonelo kwabanye.
“Umhlaba wami ushintshe ama-degree angu-180 ngalezi zifundo—inqubo ehlelayo kuzo zonke izici zempilo yami. Ngiyabonga ngalezi zifundo, njengoba ngiqala ukuphila impilo ngombono omusha.”